Lomano: voan’ny Covid-19 i Harivola Marie Sarah, ahina koa ny vadiny | NewsMada
Fifandonana nahery vaika… Niampatrampatra ny faty, dahalo 40 indray lavon’ny fokonolona
Antananarivo: le téléphérique urbain sur les rails
Nandeha mafy nisongona fiara teo alohany … taksiborosy iray nivadika, zaza iray maty tsy tra-drano
Coupe de la Caf: Bel exploit du CFFA en Zambie
Vaviantitra novonoina tamin’ny fomba feno habibiana: tsy hita intsony ny taovany, notapahana koa ny tongony
Général Richard Rakotonirina: «L’avion Casa reste notre propriété»
Lozam-pifamoivoizana tetsy Ampasampito: naiditra am-ponja ilay ramatoa nandona, nahafaty polisy
Iles Eparses: “un sujet compliqué”, selon Jean-Yves le Drian
Ankadifotsy Befelatanana: trano gasy lehibe telo rotiky ny afo
Pierre Lenoble Navony : « la démocratie parfaite n’existe pas »
Lomano: voan’ny Covid-19 i Harivola Marie Sarah, ahina koa ny vadiny
Par Taratra sur 30/06/2020
Mpanao fanatanjahantena malagasy, fantatra eo amin’ny tontolon’ny lomano i Harivola Marie Sarah, izay mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Raha ny fanazavany, ahina ho efa voa ihany koa ny vadiny. Resaka nifanaovana taminy.
Gazety Taratra (*) : Nanao ahoana ny fihetseham-po naheno fa mitondra ny tsimokaretina Coronavirus ianao ?
Harivola Marie Sarah (-) : Efa nanoman-tsaina ihany satria tsapako hoe aty amin’ny vatako ireo soritraretina covid-19 na dia mbola tsy nivaly aza ny fitiliana. Fa rehefa tena nivaly hoe « positif » dia tsy maintsy taitra sy natahotra ihany.
*Manao ahoana ny vady aman-janakao, tsy nisy voa ve ?
– Ny vadiko efa voa, tsy mbola nivaly ny fitiliana natao taminy, saingy efa miseho amin’ny vatany avokoa ireo soritraretina rehetra izay nisy tamiko. Ny zanako lahy, hatreto mbola matanjaka tsara.
*Ahoana ny fiainanareo telo mianaka ao an-trano taorian’ny valin’ny fitiliana ?
– Tsy maintsy mifanohana aloha. Dia miray hina tsara ho afaka miara-manao angaredona ilay COVID 19. Miala sasatra tanteraka izahay mivady. Ilay zanaka lahy no mahandro sakafo. Misy ireo tsara sitrapo manatitra sakafo eo an-tohatry ny trano, izay isaorana eram-po eran-tsaina. Ankoatra izay, hampitomboana ny vavaka. Efa mpanao « cellule de prière » izahay isan-kariva hatramin’izay fa hamafisina izany, ankehitriny.
*Teny fanentanana, indrindra ho an’ny fanatanjahantena ?
– Mila mitandrina foana fa tsy afaka mitoky tena hoe matanjaka ka tsy ho voa. Tsy hita maso toy ny mpifanandrina amin’ny fanatanjahanena ilay COVID 19 , nefa tena mikasa sy mitady paikady matanjaka handavoana anao. Mila atao koa ny spaoro mba hampitombo ny hery fiarovana. Raha toa ka tsy nikotrana aho nandritra ny fihibohana, mety ho hafa no ho izao ny fihombon’ny aretiko.
Fiaraha-miasa amin’i Frantsa: raikitra ny zotra an-tariby “téléphérique” Anosy- Ankatso 21/09/2021
Zandarimaria: voatendry ho kaomandin’ny sekoly sy fanofanana ny Jly Botou 21/09/2021
Betafo Jiolahy iray maty voatifitry ny polisy, iray nitsoraka tao Andraikiba 21/09/2021
Fanafihana narahina doro tanàna: lonilonim-pianakaviana nivadika ho asan-dahalo 21/09/2021
Mba hahafahana mitaky lamandy… Notolorana moto roa ny fitsarana ao Toamasina 21/09/2021
Jery taratra… Herinandro: fahamaizana etsy sy eroa